Michael Keating oo digniin culus kasoo saaray doorashada madaxweynaha Soomaaliya (DHAGEYSO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Michael Keating oo digniin culus kasoo saaray doorashada madaxweynaha Soomaaliya (DHAGEYSO)
Ergyaga gaarka ee Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Michael Keating oo wareysi siiyay idaacadda VOA-da ayaa soo dhaweeyay shaqada guddiga doorashada madaxweynaha oo uu sheegay inay qabteen howl muhiim ah.
Michael Keating ayaa sheegay inuu ku raacsan yahay guddiga doorashada madaxweynaha arrinta ah inay diideen in la dadajiyo ama dib loo dhigo doorashada sida ay dalbadeen qaar ka mid ah musharixiinta doorashada u tartameeysa.
Wuxuu Mr. Keating ka digay in cawaaqib xumo ay ka dhalan karto hadii qaab musuq-maasuq iyo isdaba marin ah lagu doorto madaxweynaha soo socda, isagoona tilmaamay in beesha caalamka aanay aqoonsan doonin shaqsigii lagu doorto qaabkaas.
Si kastaba ha ahaatee, digniintaan kasoo yeertay Michael Keating ayaa kusoo beegmaysa iyadoo xubnaha labada aqal ee barlamaanka ay sameeyeen guddiga doorashada madaxweynaha Soomaaliya, islamarkaana la mudeeyay xilliga ay dhici lahayd doorashadaas.
Doorashadaasi ayaa la shaaciyay inay dhici doonto 8-da bisha Febraayo ee sanadkaan, waxaana haatan la bilaabay diiwaan-gelinta musharixiinta ku tartamaysa doorashada.